ပြည်ပ ပို့ကုန်အတွက် အရည်အသွေး သတ်မှတ်ချက်များ
ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာ သတင်းအချက်အလက်များ
သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်(ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့်နယ်စပ်ရုံးချုပ်)အား (၅-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး Tradenet 2.0 စနစ်မှ စတင်ထုတ်ပေးသွားမည်... Myanmar Tradenet 2.0 ဖြင့် Online စနစ်အသုံးပြု၍ ပို့ကုန် သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များ အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း... သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း... စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအမိန့်ကို ပြင်ဆင်သည့်အမိန့်... MYANMAR TRADENET 2.0 စနစ် အသုံးပြုမှုစနစ်ရှင်းလင်းပွဲဖိတ်ကြားခြင်း... ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရာတွင် ဖြည့်သွင်းရ မည့် အချက်များအား မှန်ကန်စွာစိစစ်တင်ပြနိုင်ရေး အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း... ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားလျှက်ရှိသည့် Tradenet Member များအား အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း... 10 Digit HS Line (၆၈၉)လိုင်းအား ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှစ၍ Fully Online Licensing စနစ်ဖြင့် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း... ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား e-mail ဖြင့် လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငွေပေးသွင်းမှုအား Quick pay ဖြင့် ပေးသွင်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း... Fully Online ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုနှင်ပတ်သတ်၍ သိရှိရမည့်အချက်အလက်များ...
Page: ../ 1
ပြည်ပကုမ္ပဏီများမှ ဆန်၊ ပဲ ၊ ပြောင်းများ ဝယ်ယူလို (19.11.08)
ဆန်၊ ပဲ၊ ပြောင်းများ ဝယ်လိုသည့် ပြည်ပကုမ္ပဏီများကို မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်များ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည် -
Mr. John Mc Enroe
45, JLN KIA PENG, KUALA LUMPUR - 60000, MALAYSIA
ORIS CONTRUCTION , CONTRACTING & TRADING LTD.CO.
Mr. Haluk UNLU
Cilek Mh 6396 Sk. No 5, Mersin, Mersin, Turkey 33070
Mr. Khurrum Kamaal
P.O. Box: 3035, Ajman, ae, United Arab Emirates 00000 Tags chickpeas
Mr. Kamaal Makrani
P.O. Box: 5657, KARACHI, Sind, United Arab Emirates
Mr. Ali Adil
Po-Box-1688, Pin-Code 13006-Safat, Kuwait, Kuwait, Kuwait 13006
A. Rauf A. Aziz
Mr. Muhammed Siddiqul Anam
YOUSUF ALI BHAI BUILDING, ALTAF HUSSAIN ROAD, NEW CHALLI, KARACHI - 74000, SIND, PAKISTAN
Farin Internasyonal Kimya
Ms. Simin Tolunay
SAN. VE TIC. A.^., YOLU 3. KM, K1Z1LüZüMKöYü MEVKI, KEMALPASA - 35170, IZMIR, TURKEY
မြန်မာနိုင်ငံမှ မျိုးစေ့များတင်သွင်းလို (29-10-2007)
ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ ကူဝိတ်-အင်ဒို ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ လီမီတက်အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစေ့များ ဝယ်ယူလို ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပဈေးကွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် သုတေသနဌာနသို့ မေးမြန်း စုံစမ်းလာပါသဖြင့် မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်များ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဆိုပါကုမ္ပဏီ၏ လိပ်စာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည် -
Kuwait Indo Trading Co., LTd.
Phone : + 9654745400 / 55
Fax : + 9654764889 / 4748510
e-mail : marketing.kitco@wazzan.com
ဟောင်ကောင်မှ နှမ်းဖြူ နှင့် နှမ်းနက်ဝယ်လို(3-9-2007)
မြန်မာနိုင်ငံက နှမ်းနက်၊ နှမ်းဖြူတို့ကို ဟောင်ကောင်ရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဝယ်ယူလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ နှမ်းနက်၊ နှမ်းဖြူရောင်းလိုသည့် မြန်မာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ် – ၃၇၆၄၁၆၊ ၃၇၆၄၉၀ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ ဂုံနီနှင့် ဝါစေ့များ ဝယ်ယူလို(8-8-2007)
ကိုရီးယာသမ္မတနိုင်ငံရှိ ENTROL Co., Ltd က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ လယ်ယာထွက်ကုန် များကို ဝယ်ယူလျက်ရှိပြီး ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂုံနီထည်(Jute Cloth)၊ ဂုံနီကြိုး(Jute Rope)၊ ဝါစေ့(Cottonseed)၊ ဝါစေ့ကြိတ်ဖတ်(Cottonseed Cake) များကို ဝယ်ယူလိုကြောင်း သိရှိရပါသည်။စိတ်ပါဝင်စားသည့် မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များသည် အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ Mr. J.H Woo Managing Director ENTROL Co., Ltd. Exporter, Importer & Manufacturer 157-3, Gunja-dong, Kwangjin-gu, Soul 143-839, Korea e-mail: aglink@daum.net, Jhwoo33@kornet.net Mobile phone: +82-11-9144-6052 Tel:+82-2-469-3229 Fax:+82-2-499-0377
မြန်မာနိုင်ငံကအရည်အသွေးကောင်းပြီး၊ အဆင်အမျိုးမျိုးစုံလင်တဲ့ ကျားဝတ်လုံချည်တွေကို ဝယ်ယူတင်သွင်းလိုကြောင်း၊ သိရိလင်္ကာမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနကိုစုံစမ်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားတဲ့ မြန်မာ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့် သုတေသနဌာန - MIRT (ရန်ကုန်) ဖုံးအမှတ် (၀၁) ၃၇၆၄၁၆၊ (၀၁) ၃၇၆၄၉၀၊ (၀၁) ၂၅၀၈၇၁တို့ကိုစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော မြန်မာကုမ္ပဏီများအတွက်သတင်းကောင်း(8-5-2007)
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကော်လကတ္တားမြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီလိမိတက် (၂)ခုကမြန် မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်မှ တစ်ဆင့် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ (၂)ခုအ နက် တစ်ခုဖြစ်သော Aska Investments Pvt.Ltd မှာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အိမ် ၊ခြံ ၊မြေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( Road Transport and Real Estate Business ) ကိုလုပ်ကိုင်နေသော ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီလီမီတက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါကြောင်း၊ Road Transport and Real Estate Business လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်သော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားစီးပွား ရေးနယ်ပယ် များတွင်လည်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်သော အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်တို့ကို သိရှိလိုပါကြောင်း၊ ဆက်သွယ် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ဒုတိယကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Mironda Trade & Commerce Pvt Ltd. ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိသော Steam Coal နှင့် Cooking Coal များကိုဝယ်ယူတင်သွင်းလိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံနှင့် စတီးလ်ပစ္စည်း ကုန်ချောများကို ကုန်သွယ်မှု ပြုလိုပါကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာပါသည်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများနှင့် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုသော မြန်မာ နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများအနေ ဖြင့် အသေးစိတ်သတင်း အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့် သုတေသနဌာန (ရန်ကုန်ရုံးခွဲ) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းသတင်းဆောင်းပါးဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
မြန်မာ့ထင်းရှုးမှိုကို တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ ဝယ်ယူလိုကြောင်း ကမ်းလှမ်းလာ(7-5-2007)
မြန်မာနိုင်ငံက ထင်းရှုးမှို (Pine Mushroom) ကို ဝယ်ယူလိုတယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက Dae Hyun Heung San Co., ရဲ့ဥက� ဋ္ဌ Mr.Oh Myung-Jin က တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးကို ဆက်သွယ်ကမ်းလှမ်း လာကြောင်း ကောမတ်စ်ကသတင်းရရှိပါတယ်။ Mr.Oh Myung-Jin က သူ့အနေနဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မေလထဲမှာ မြန်မာ နိုင်ငံကို ထင်းရှုးမှိုဝယ်ယူရေး ကိစ္စအတွက် လာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာထင်းရှုးမှိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ ခူးဆွတ်နိုင်တဲ့ အချိန်၊ တစ်လအတွက် ပျမ်းမျှအထွက်နှုန်း၊ အရွယ်အစားနဲ့အရည်အသွေးအရ ဈေးနှုန်းအခြေအနေ တွေကို ကြိုတင် သိရှိလိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Mr.Oh Myung-Jin အနေနဲ့ထင်းရှုးမှိုအပြင် ဆီထွက်သီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Perilla Seed ကိုလည်း ဝယ်ယူလိုတဲ့ အတွက် မြန်မာ့တောင်သူလယ်သမားတွေကို မျိုးစေ့ပေးပြီး၊ ရိတ်သိမ်းချိန်မှာ ထွက်ရှိ သမျှအားလုံးကို ဝယ်ယူလိုတယ်လို့ သိရကြောင်း မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်များကို အသိပေးရေးသား လိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဆူစေ့များ နယ်စပ်နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရ၍ ဈေးကောင်းရနေ
ဧပြီလလယ်ပိုင်းတွင် လွိုင်ကော်ဈေးကွက်သို့ လောပိတ၊ မထောခူ၊ ကုန်းသာ၊ လွိုင်လင်လေးစသည့် ကျေးရွာများမှ ကြက်ဆူစေ့အကြားများ ဝင်ရောက်မှုပိုမိုလာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ယခင်မတ်လစတုတ္ထပတ် ၌ ကြက်ဆူစေ့ တစ်ပိဿာလျှင် ၅၂၀ ကျပ်ဈေးရှိရာမှ ယခုဧပြီလပထမပတ်တွင် ၅၇၀ ကျပ်အထိဈေးရရှိလာသဖြင့် မြို့ပေါ်ပွဲရုံများသို့လာရောက် ရောင်းချမှု ပိုမိုလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ဆီဆိုင်ဘက်မှလည်း ဝင်ရောက်မှု ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ မန္တလေးဘက်မှ ဆွဲအားပေါ်မူတည်၍ ဈေးအတက်အကျရှိပြီး၊ ယခုကြက်ဆူစေ့ဈေးနှုန်းမှာ မြင့်တက်လာသော်လည်း ယခင်နှစ်အမြင့်ဆုံးဈေးကို မမီသေးကြောင်း မြို့ပေါ်ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရှိ ရပါသည်။ ယနေ့မန္တလေးဈေးကွက်၌ ကြက်ဆူစေ့အကြား တစ်ပိဿာလျှင် ၆၄၀ ကျပ်ခန့်ရှိနေပြီး လွိုင်ကော်မှ မန္တလေးသို့ ကြက်ဆူစေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခမှာ တစ်ပိဿာလျှင် ၃၅ ကျပ်ဈေးရှိကြောင်းနှင့် တစ်ပတ်လျှင် (၁၀) ဘီးကားတစ်စီးစာခန့် တင်ပို့မှုရှိနေကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။
၎င်းအပြင် ကြက်ဆူစေ့များကို မူဆယ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှတဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့၍ ဈေးကွက်ရရှိနေရာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဧပြီ (၁)ရက်နေ့မှ (၁၄)ရက်နေ့အတွင်း ကြက်ဆူစေ့တန်ချိန် ၁၇၇၉ တန်တင်ပို့ ခဲ့ရပြီး၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇)သိန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Terms of Conditioned:
Quantity: 100,000 Metric Tons Per year
Shipment: CIF Fang Cheng Port, Guang Xi Province, China, within 15 days
After receipt of acceptable L/C
Mr. Michael Law
U &T INTERNATIONAL LTD.
ကိုရီးယားနိုင်ငံINTERNATIONAL COMMERCIAL CORPORATION Co., Ltd. က အောက်ဖော်ပြပါ ရေထွက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားကြောင်း ကိုရီးယားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးကတဆင့် စုံစမ်းလာပါသည်။ ထို့ကြောင့် INTERNATIONAL COMMERCIAL CORPORATION Co., Ltd. နှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုသူများ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ရန် လိပ်စာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်-
INTERNATIONAL COMMERCIAL CORPORATION
No.1416, SAMKOO BLDG 16-49, HANGANGRO 3-GA
YONGSAN-GU, SEOUL KOREA
TEL : 82-2-715-1987,8 FAX : 82-2-718-3023
E-mail : icc777@kornct.net
(1) Live wild Fresh Water Eel (Big Size)
Scientific Name : Anguilla Rostrata or other species
Size : 600g up/pcs
Spec : Pointed Norse, Not Flat Head
Color : Sally Color : Yellow
Body color : Green or Light brown
(2) Live wild or Cultured Fresh Water Eels (Small Size)
Scientific Name : Anything will do
Size : 3pos ~ 5pos/Kg (220g ~ 330g/pcs)
Spec: Pointed Norse, Not Flat Head
Color: Anything will do
(3) Soft sheil turtle (Trionyx Sinensis)
Scientific Name : Trionyx Sinensis
Sizes : 600g ~ 800g/pcs, 800g ~ 1Kg/pcs, 1Kg ~ 1.5Kg/pcs, 1.5Kg ~ 2Kg/pcs, 2Kg up/pcs
© 2006 Myanmar TradeNET. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze.